Vectr: Alternative maimaim-poana amin'ny Adobe Illustrator | Martech Zone
Vectr: Alternative maimaim-poana amin'ny Adobe Illustrator
Vectr dia maimaimpoana ary tena intuitive tonian'ny sary vector fampiharana ho an'ny tranonkala sy ny birao. Ny Vectr dia manana fantsom-pianarana ambany dia ambany ary mahatonga ny famolavolana sary azo zahana amin'ny rehetra. Vectr dia hijanona ho afaka mandrakizay tsy misy kofehy mifamatotra.
Inona no maha samy hafa ny Vector sy ny Raster Graphics?
Vector-monina ny sary dia vita amin'ny tsipika sy lalana hamoronana sary. Izy ireo dia manana teboka fanombohana, teboka farany ary tsipika eo anelanelany. Izy ireo koa dia mety mamorona zavatra fenoina. Ny tombony amin'ny sary vector dia ny hamerenana azy io fa mbola mitazona ny fahamendrehan'ilay zavatra voalohany. Raster-monina ny sary dia misy pixel amin'ny fandrindrana manokana. Rehefa manitatra sary raster amin'ny endriny voalohany ianao, dia miolakolaka ireo piksela.
Mieritrereta momba ny telozoro mifanohitra amin'ny sary. Ny telozoro dia mety manana teboka 3, andalana eo anelanelany ary fenoina loko iray. Rehefa manitatra ny telozoro ka hatramin'ny avo roa heny ny habeny dia esorinao lavitra fotsiny ireo teboka telo. Tsy misy fanodikodinana na ahoana na ahoana. Manitatra ny sarin'ny olona iray amin'ny halehany avo roa heny. Ho hitanao fa ho manjavozavo sy ho diso hevitra ny sary satria nitarina ny loko bitika handrakofana piksel bebe kokoa.
Izany no mahatonga ny kisary sy ny logo izay mila ovaina habe mahomby matetika mifototra amin'ny vector. Ary izany no antony ilantsika matetika ny sary miorina amin'ny raster lehibe rehefa miasa amin'ny Internet… hany ka mihena ny habeny raha tsy misy fanodikodinana kely akory.
Vectr dia misy amin'ny Internet na azonao sintonina ny rindranasa ho an'ny OSX, Windows, Chromebook, na Linux. Manana andiany manankarena izy ireo endri-javatra ao amin'ny sori-dalan'izy ireo izay afaka nanao azy io ho safidy mahomby amin'ny Adobe Illustrator, ao anatin'izany ireo kinova voarakitra izay azo ampidirina amina mpanonta an-tserasera.
Andramo izao ny Vectr!
Tags: sarintany bitrasterraster mifanohitra vectorVectortonian'ny sary vectorvector mifanohitra amin'ny rastermpamoaka sary miorina amin'ny vectorvector
Antontan'isa momba ny marketing amin'ny horonan-tsary izay mety tsy fantatrao!